Afhayeenka Juba Seeraar oo maanta Qirtay In Kudhaa Laga Saaray xog badana bixiyay+ COD | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Afhayeenka Juba Seeraar oo maanta Qirtay In Kudhaa Laga Saaray xog badana bixiyay+ COD
Afhayeenka maamulka KMG ee Jubba Cabdinaasir Seeraar Maax, ayaa faah faahin ka bixiyay dagaal culus oo shalay ka dhacay deegaanka Kudhaa ee gobalka Jubada Hoose, halkaasi oo qasaare xoogan uu ka dhashay.
Seeraar ayaa sheegay in dagaalkaasi ay guul ka gaareen, islaamarkaana Al-shabaab ay hub badan ka furteen waa sida uu hadalka u dhigaye, waxaana uu sheegay in qaab xeeladeysan Al-shabaab ay weerarka usoo qaadeen.
Waxa uu qiray in laga qabsaday Kudhaa, sidoo kale waxa uu qiray in ciidamada Jubba waxyeelo xoogan ay soo gaartay, isaga oo tilmaamay in saacadaha soo aadan ay Maleeshiyaadka Argagaxisada Al-shabaab ka saari doonaan halkaasi.
Dhanka Al-shabaab ayuu sheegay in ay ka dileen ilaa 73 askario, Meydad badanna ay ka carareen ilaa seddax marna ay soo laabteen.
HALKAN HOOSANE KADHAGAYSO SHABAAB OO KAHADLAYA WIXII KADHACAY KUDHAA